I-app iya kukuvumela ukuba uthule uthuli kwaye usebenzise iwotshi yakho yamatye endala ngefowuni entsha ye-android
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Insiza iya kukuvumela ukuba uthule kwaye usebenzise i-Pebble Watch yakho endala kunye nefowuni entsha ye-Android
Uyayikhumbula i-Pebble smartwatch? Ngeli xesha laqaliswa okokuqala kwiKickstarter ngo-Epreli ka-2012, esi sixhobo safumana eyona nkxaso mali kuyo nayiphi na imveliso kwimbali yeKickstarter. Iiwotshi, ezisebenza ngeefowuni zombini ze-iOS kunye ne-Android, ziqale ukuthunyelwa ngoJanuwari 2013. I-Pebble Watch iqale ngokuphumelela ngeeyunithi ezingama-300,000 ezithunyelwe kunyaka wayo wokuqala, isigidi esi-1 sithunyelwe ngo-2014, kunye nezigidi ezi-2 ngo-Disemba 7, 2017 .
Nge-7 ka-Disemba ka-2016, uPebble wayengenamali kwaye ithengise ipropathi yayo enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye neeasethi kwiFitbit . Le yokugqibela yathatha ulawulo lweeNjineli zePebble & apos; abavavanyi, inkqubo yokusebenza, ukubukela iiapps, iinkonzo zefu kunye nelungelo elilodwa lomenzi wechiza. Uluntu lwabanini beThebble lukwazile ukuxhasa iiwotshi zePebble ngeprojekthi ebizwa ngokuba yi'Rebble 'evumela ii-smartwatches ukuba zilayishwe ngesoftware ehlaziyiweyo. Ngokwe-XDA , I-Pebble app ihlala ingaziwa njengomthombo osemthethweni weefayile zeLitye kwiifowuni zangoku ze-Android.
Ngaba ufuna ukusebenzisa i-Pebble Watch yakho endala kunye nefowuni yanamhlanje ye-Android? Uyakudinga ukufaka i-Sideload Helper kwifowuni yakho kuqala
UAlice Grey kunye noLavender Glaab, abaphuhlisi beprojekthi yeRebble, baphuhlise usetyenziso lwe-Android eligama linguSideload Helper nguRebble. Insiza iya kuvula iifayile zeThebble kwizixhobo ezitsha ze-Android kwaye uzidlulisele kwi-Pebble app apho zinokufakwa khona. Insiza ikunceda uvule i-.pbw (iwindows / iwappapp), i-pbl (ulwimi), kunye neefayile ze-.pbz (i-firmware). Ukuba umsebenzisi uneRebble Web Services emiselweyo, iya kuguqulela kwakhona iRebble appstore amakhonkco kubandakanya amakhonkco elifa.
Thatha i-Pebble yakho ngaphandle kwedrowa, uvuthele uthuli, kwaye ulayishe usetyenziso kwifowuni yakho ye-Android
Umncedisi weSideload nguRebble inokufakwa kwiVenkile yeGoogle Play . Ke ukuba u & apos; uyilahlile la Tebble lidala, ulikhuphe ngaphandle kwedrowa, uvuthele uthuli, ulayishe iSideload Helper kwifowuni yakho entsha ye-Android, kwaye wena kunye neapos; buyela kwishishini kunye newotshi yakho yakudala.
Nantsi iiapos zokwenza ingcambu yes Samsung Galaxy S5 (SM-G900F) inyathelo ngenyathelo
Uvavanyo lweSamsung A6 (2018)